Apple wuxuu barnaamij ka bilaabay "Dib ugu noqoshada midnimadii" Australia iyo New Zealand | Waxaan ka socdaa mac
Sannad kasta xilligan oo kale, Apple waxay bilowdaa barnaamijka "Ku noqoshada dugsiga", labadaba Australia iyo New Zealand, laakiin waxay u muuqataa in sannadkan, wiilasha Cupertino ay gacantooda kala baxeen barnaamij cusub oo loogu magac daray "Ku noqoshada Jaamacadda", barnaamij la faray labadaba ardayda iyo macalimiinta ama nooc kasta oo shaqaale ah oo la xidhiidha waxbarida dalka.
Munaasabaddan, Apple wuxuu u oggolaan doonaa dhammaan kuwa iibsada MacBook inay doortaan, iyadoon loo eegin nooca la xushay, hadiyad ka kooban Betas Solo3, Powerbeats 3 ama BeatsX, si aad ugu adeegsato qalabka cusub.
Si looga faa'iideysto dhiirrigelintan, dhiirrigelin aan runtii ku koobnayn oo keliya MacBook, waa inaan helnaa iMac, iMac Pro, Mac Pro, MacBook, MacBook Air ama MacBook Pro cusub. Labadaba Mac Mini iyo qalabka dib loo cusboonaysiiyay ee kaladuwan ee Apple ay ku iibinayso websaydhkooda ma daboolin xayeysiintaan, ama Mac ama iPad Pro. Laakiin hadii aan ugu dambeyn go’aansano inaan iibsano iPad Pro, 10,5 ama 12,9 inji, Apple waxay si toos ah u gaarsiin doontaa BeatsX ee ku jira kor u qaadistaan, iyadoon awoodin inay kala doorato moodooyinka hadii la heli karo iibsiga Mac.
Dabcan, haddii aan rabno inaan helno xoogaa Powerbeats 3, Apple waxay iyaga siisaa iyaga oo bixiya farqi, AU $ 59 / NZ $ 70. Laakiin haddii waxa aan dooneyno ay yihiin Beats Solo 3, qiimaha la bixinayo waxay u kordheysaa AU $ 200 / NZ $ 230, qiimo ka hooseeya inta aan toos uga heli karno Dukaan kasta oo Apple ah oo ku yaal New Zealand ama Australia. Si looga faa'iideysto dalabkan, Australia gudaheeda waa inaan si toos ah uga iibsanaa Apple Store, halka New Zealand, dalabkan waxaa kaliya lagu heli karaa iyadoo la adeegsanayo arjiga Apple Store ama taleefanka adeegga macaamiisha. Labada dalba, waad sii wadi kartaa inaad uga faa'iideysato qiimo dhimista qaybta waxbarashada, sidaa darteed waa wakhti ku habboon in la badbaadiyo lacag fiican oo sidoo kale la helo xoogagga dhegaha waaweyn.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Noticias » Apple waxay ka bilowday Australia iyo New Zealand barnaamijka "Ku Noqoshada Univesity"